Garibaldi Highlands Suite - I-Airbnb
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguSara
Ipholile, uyilo lwangoku entliziyweni yeGaribaldi Highlands. Yabucala ngaphezulu kwegumbi elingaphantsi komhlaba kunye nomgangatho ongasemva oneshedi yezixhobo. Ifakwe embindini wayo yonke into, yimizuzu engama-35 kuphela yokuqhuba ukuya eWhistler Creekside ukubetha iingoma zokuqala. Gqibezela nge-smart tv, iNetflix, iWifi, iKitchen epheleleyo kunye nokuPaka. Ifanelekile kubahambi abaphonononga uLwandle ukuya esibhakabhakeni nakwabo badlulayo. Siyavuya ukukukhomba kwicala elifanelekileyo ngeengcebiso zasekhaya ukusuka apho ungatya khona, usele, unyuke, ukrazule, ukhwele okanye uphumle nje.
Nokuba awungoMthandi waNgaphandle, le yindawo entle yokuhlala, idrive emfutshane ukusuka kwiVancouver kunye neWhistler yindawo ephakathi egqibeleleyo yohambo oluya eLwandle oluya eSky Corridor. Indawo yakho ibucala ngokupheleleyo (icandeke kancinci) inomgangatho ukuya kwiikhethini zesilingi kwigumbi lokulala kwaye ivale amehlo kucango lwangaphambili kunye neefestile ezivumela ukuba bucala okuninzi njengoko ufuna. Relax kwibhedi enkulu entle yaseKumkani enemiqamelo etofotofo kunye neelinen. Inkonzo yokuhlamba impahla iyafumaneka kwintlawulo eyongezelelweyo kubahambi abafuna ukubeka iingcambu kwaye bahlolisise i-bounty engapheliyo ye-Squamish.
I-Garibaldi Highlands yeyona ndawo iphakamileyo yaseSquamish. Ibekwe embindini phakathi kwezona ndlela ziphambili zothungelwano, ikwayindawo yokulahlwa kude nevenkile ethengisa ukutya efikelelekayo, eyona sushi ibalaseleyo edolophini kunye nenani leendawo eziphezulu zokuthengisa utywala.
Ukuba kukho nantoni na oyifunayo, ababuki zindwendwe bakho basecaleni kwaye bayafumaneka ngesaziso somzuzwana.